Teregiramu inovandudzwa ichivandudza kudyidzana pamwe nezvakataurwa mumapoka | IPhone nhau
Teregiramu inovandudzwa ichivandudza kudyidzana nekutaurwa mumapoka
Teregiramu yave, pane zvayakanakira, iko kutumira mameseji kunyorera kwavanoshandisa mapuratifomu mazhinji anoda kuve nehukama nevanoverenga. PaActualidad iPhone, isu tine yedu yeTeregiramu chiteshi uko kwatinopindura mibvunzo, kugadzirisa mibvunzo ... yenhengo dzese dzinoita boka.
Iyo inokurumidza nzira yekubvunza mibvunzo ndeiyi nekutaura, asi dzimwe nguva, kana tiine akati wandei, kudyidzana kwacho kwainetsa, uye ndinoti zvaive, nekuti mushure mekupedzisira kweTeregiramu yekuvandudza, kudyidzana nezvose zvataurwa kwati nani zvakanyanya.
Mushure mekuvandudzwa uku, huwandu hwekutaurwa kwatakaonekwa muboka renzira kana kutaura chatinayo mukushandisa uye isu tinogona kufamba kubva kune imwe nekukurumidza kupindura. Kune izvi, Teregiramu inoshandisa iko kusaina, pamwe pamwe nenhamba yekutaura kwatinayo. Kana tangopinda muhurukuro, tinogona kufamba pakati pezvakataurwa nechiratidzo chimwe chete ichi.
Chimwe chinhu chitsva icho chinovandudzwa ichi chinotiunzira chine chekuita neminamato yatinoshandisa mazuva ese, kubvira iko kunyorera inotibvumidza kuti tivawedzere ivo vedu vatinoda kuti vakwanise kuwana nekukurumidza kwavari pasina kutsvaga boka ravari. Inoenderana nezvinamirwa, Teregiramu inotibvumidza kuwedzera pasuru yezvinamirwa kuboka, kuitira kuti vashandisi vese vaishandise vasina kuirodha.
Paunenge uchifona, iko kunyorera kwawedzera chiratidzo chitsva icho inotibvumidza isu kuziva iyo yekufona mhando nguva dzese tiri kuita, izvo zvinotibvumidza isu kuziva kana tichifanira kufambisa chinzvimbo chedu kugadzirisa iyo Wi-Fi kana 4G chiratidzo. Sarudzo yekutsvaga nema hashtag yatovepo nekutaurirana kana nemapoka, yakanakira patinotsvaga ruzivo rwakananga tichiziva kuti iboka ripi, kuitira kuti tidzivise mhedzisiro yakawanda iyo chishandiso chinodzoka kana uchitsvaga.
Chekupedzisira, kana uchiwanzo tevera Twitch nhepfenyuro, Teregiramu inotibvumira kuti tinakidzwe navo pakutengesa kuyangarara, kugona uye kushandura pakati penyaya tichinakidzwa nemavhidhiyo aunofarira. Teregiramu inowanikwa kuti utore mahara kuburikidza neinotevera link. Kana usati waedza ivo, taura neshamwari dzako uye uzviedze, zvirokwazvo hazvizokuodza moyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Teregiramu inovandudzwa ichivandudza kudyidzana nekutaurwa mumapoka
Iyo iPhone Edition yaizobvumira Siri kuti ishandiswe kuburikidza nemagetsi bhatani
Readdle inopemberera yayo yegumi yegumi neiyi purogiramu kurongedza pahafu yemutengo